Rarama uye ubudirire! UNWTO, inguva yekugadzirisazve kushanya!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Rarama uye ubudirire! UNWTO, inguva yekugadzirisazve kushanya!
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chikamu chekushanya chiri kutarisa zvakanyanya kuSaudi Arabia kunongedzo nerutsigiro. Izvi zvaive pachena pamusangano wanhasi weUNWTO wedunhu reAfrica musangano muCabo Verde. "Inguva yekugadzirisazve kushanya kune ramangwana" yaive meseji nemutungamiri weSaudi kuWorld Tourism ne Africa.
Musangano wechitanhatu weUNWTO Commission for Africa uri kuitirwa muSal, Cabo Verde, kuHilton Hotel.
Nhaurwa dzekukurukurirana dzinosanganisira yekuvandudza pane iyo yakatemerwa International Code yeKudzivirirwa kweVashanyi, gadziriro yeGeneral Assembly iri kuuya, uye kusarudzwa kwevamiriri.
Nyeredzi yechiitiko ichi yakabva kuSaudi Arabia. HE Ahmed al-Khatib, Gurukota rezveKushanya kuSaudi Arabia, vakapa zvirevo zvakanzwika muchiitiko ichi pamwe nevamiriri.
UNWTO ine makomisheni matanhatu ematunhu - Africa, America, East Asia uye Pacific, Europe, Middle East, uye South Asia. Iwo makomisheni anosangana kamwechete pagore uye anoumbwa neVakazara Nhengo uye Vanobatana Nhengo kubva mudunhu iro. Nhengo Dzakabatana kubva mudunhu dzinotora chikamu sevacherechedzi.
Pakati penjodzi ye COVID-19, imwe nhengo yeUNWTO yakamira pakupinda misangano yese yedunhu pasi rese kusvika parizvino.
Nhengo iyi Humambo hweSaudi Arabia, inomiririrwa naHE Ahmed al-Khatib, Gurukota rezveKushanya.
Gurukota rakaonekwa se "nyeredzi" isina kutaurwa pamisangano chero ipi kana chiitiko chaanopinda, uye anopinda mizhinji yacho, achiratidza kuzvipira kune indasitiri yekushanya neyekushanya yepasirese.
Saudi Arabia yave ichishandisa mabhiriyoni kubatsira chikamu ichi kwete muHumambo chete asi kwese pasi. Chido chekuunza muzinda weKufamba neKushanya kuRiyadh kunosanganisira kufamba kweUNWTO dzimbahwe.
Nhumwa dzanhasi UNWTO Regional Commission ye Africa dzakanyatsoteerera apo HE Ahmed al-Khatib akataura kuvamiriri. Akataura zvinotevera:
Denda rakaratidza kukosha kwekukurumidza kwekudyidzana kwepasirese, kubatana, uye hutungamiriri.
Tiri kushanda pamwe nehukama muAfrica yose kuona kuti indasitiri yekushanya yepasi rose inovakira pazvidzidzo zve COVID-19.
Hatigone kuwana dambudziko repasi rese rekukuvadza chikamu mune ramangwana zvakanyanya sekuita kwachakaita.
Asi ndine meseji yakasimba uye yakanaka yekugovana nhasi. Tinogona kutora matanho izvozvi kuti tione kuti chikamu chakakosha ichi chasimbiswa kuitira kuti chigone kusangana nematambudziko emangwana.
al-Khatib akapfupisa meseji yayo:
Rarama uye ubudirire!
… Inguva yekugadzirisazve kushanya kune ramangwana!
Mhedzisiro yeCOVID-19 pabazi rezveKushanya muAfrica
Mhedzisiro ye COVID-19 pakushanya kwepasi rose mu Africa kwakakonzera kuderera kwe74% muhuwandu hwevashanyi vekunze uye 85% maererano neresiti yekushanyirwa kwenyika dzese. Dhata re2021 rinoratidza kuti dunhu rakatambura kuderera kwe81% mukuuya kwenyika dzese mumwedzi mishanu yekutanga ye5 kana zvichienzaniswa ne2021. Kukanganiswa kwakaitwa nematunhu kunoratidza kuti North Africa yakarasikirwa ne2019% yevakasvika mu78 uye Sub-Saharan Africa 2020%.
Aya maitiro akafanana aripo mu2021 data inoratidza kuderera kwe83% uye 80% zvichiteerana kwemwedzi mishanu yekutanga yegore.
Kubva muna Chikumi 1, 2021, Africa inobata yakadzikira mwero wekurambidzwa kwekufamba munzvimbo zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzepasirese, sekureva kwemushumo wegumi wegumi weUNWTO wezvekurambidzwa kwekufamba. 10% yenzvimbo dzese muAsia nePacific dzakavharwa zvachose, zvichienzaniswa ne70% chete muEurope, pamwe ne13% muAmerica, 20% muAfrica, uye 19% kuMiddle East.
Dhata inowanikwa kuUNWTO Tourism Kudzoreredza Tracker yeakasiyana maindasitiri maitirwo anosimbisa iko kukanganisa maitiro ari pamusoro.
Dhata kubva kuInternational Civil Aviation Organisation (ICAO) inoratidza kuti mweya wepamhepo wakadzika uri pasi pe33% kana zvichienzaniswa ne2019 kubva munaChikunguru, nepo huwandu hwenzira dzenyika dzese hwakadzikira 53%. Zvichakadaro, data rekubhururuka kwekufambisa nendege kubva kuForwardKeys rinoratidza kuderera kwakadzika kwe75% mukuchengetedza chaiko kwemhepo.
Mhedzisiro yacho yese zviri zviviri zvirinani kana zvichienzaniswa nani kupfuura wepasirese yepasirese uko huwandu hwemhepo panzira dzepasi rese huri 71% pasi uye kubhuka 88%.
STR data inoratidza kuti nharaunda yakasvika makumi mana nemasere muzana muhotera muna Chikunguru 42, iko kujekesa kuri pachena nekufamba kwenguva muna2021.Nezvikamu, Maodzanyemba neSub Saharan Africa (2021% uye 38% zvichiteerana) zvinoratidza mhedzisiro irinani kupfuura Southern Africa (37%) uko mamiriro ezvinhu akawedzera muna Chikunguru.
Kugadzwa kweMatunhu UNWTO Mahofisi
Nyika dzinotevera shanu dzedunhu reAfrica: South Africa, Morocco, Ghana, Cabo Verde, neKenya vakazivisa zviri pamutemo Secretary-General nezve kuratidza kwavo kufarira kuvaka UNWTO Regional Office ye Africa kusimbisa kubatana pamwe nekutsigira, zvakare sechibvumirano chekuzadzikiswa kweAgenda ye Africa-Tourism yeKubatanidza Kuwedzera uye kuunza nzira yekupa masimba kumatunhu eUNWTO mashandiro uye mashandiro kuitira kuti zvienderane zvakanyanya nezvinodiwa nezvakakosha zveNhengo dzeNyika dzeAfrica.
Global Global Dambudziko ReKomiti
Mumushumo wakapihwa kunhumwa muCabo Verde, Secretary-General akataura mumushumo wake kuti kuti ave nechokwadi chekugadzirisa mhinduro, Secretary-General akagadza Global Tourism Crisis Committee nevekunze vehurumende pamwe nevemasangano akazvimirira, musangano wayo wekutanga munaKurume 19, 2020.
Dare iri rinoumbwa neUNWTO, vamiriri venhengo dzaro (Masachigaro eUNWTO Executive Council nematanhatu eKomisheni Yematunhu pamwe nedzimwe nyika dzakasarudzwa neCommission Chairs, World Health Organisation (WHO), International Civil Aviation Organisation (ICAO ), iyo International Maritime Organisation (IMO), iyo International Labour Organisation (ILO), iyo Organisation Yezvehupfumi Kubatana pamwe neBudiriro (OECD), Nyika
Bank (WB), pamwe neakazvimirira chikamu - iyo UNWTO Inobatana Nhengo, Airports Council International (ACI), Cruise Lines International Association (CLIA), International Air Transport Association (IATA), uye World Travel uye Tourism Council (WTTC).
Mushure memisangano mitanhatu yedare redambudziko, yakafunga kuumba tekinoroji komiti kuti igadzire zviyero zvepasirese nezvibvumirano zvekutangazve kushanya.
Musi waApril 8, pamusangano wayo wechi9, Komiti yakatsigira UNWTO Kurudziro yeKutangazve Tourism ine nzvimbo ina dzakakosha: 4) Dzorerazve migwagwa yakachengeteka yekuyambuka kufamba; 1) Kurudzira kufamba kwakachengeteka kunzvimbo dzese dzerwendo; 2) Ipa mvura kumakambani uye chengetedza mabasa; uye 3) Dzosera chivimbo chevafambi
Pasi peiyo hashtag #traveltomorrow, UNWTO anga aburitsa mushumo pakutsigira mabasa uye hupfumi kuburikidza nekufamba uye kushanya.
Vapindiri kubva kune mamwe emasangano ataurwa mumushumo weSecretary-General vaive vashoma enthuiastic.
apo eTurboNews yakabvunza manejimendi weWTTC nezve kuwanda kwemisangano yeGlobal Crisis Committee, mhinduro yaive: Kwete chokwadi nezve frequency asi kwete yakajairwa. Hatizivi zvakawanda nezvazvo. Tine nhengo dzedu dzeboka dzinosangana vhiki nevhiki kweanopfuura gore.
Sachigaro weAfrican Tourism Board VaCuthbert Ncube vanogamuchira meseji yetariro, chiratidzo, uye nhungamiro Saudi Arabia yave kuratidza kuAfrica.
Akaudza eTurboNews, “Iyo African Tourism Bhodhi yakagadzirira kushanda neUNWTO uye nehumambo hweSaudi Arabia kuti iite Africa 'Kuenda Kwesarudzo Yenyika.' ”
Mary Kalikawe anoti:
Svondo 4, 2021 pa 19: 13
Bravo Gurukota rezveKushanya Saudi Arabia. Bravo ATB Sachigaro Ncube